Real Madrid Oo Diyaar U Ah Iney Iska Iibiso Eden Hazard Xagaaga – Garsoore Sports
Real Madrid Oo…
Dulqaadkii Real Madrid ee Eden Hazard ayaa u muuqda mid sii dhamaanaya, iyadoo wararku ay sheegayaan in kooxda Blaugrana ay diyaar u tahay inay dhageysato dalabyada u imanaya xiddigan marka uu furmo suuqa kala iibsiga cayaartooyda.
Ciyaaryahankii hore ee kooxda Chelsea ayaa ku guuldarreystay inuu ka soo baxo wixii laga filayay kaddib markii 30 jirkan waqtigiisa magaalada Madrid ay hareeyay dhaawacyo.
Hazard ayaana sidaa darteed kaliya 27 kulan oo La Liga ah u saftay kooxda Madrid isagoo 3 jeer shabaqa soo taabtay ku dhowaad labo xilli ciyaareed oo buuxa oo uu joogay kooxda.
Sawirro laga qaaday xiddigan reer Belguim oo la qoslaya saaxiibbadiisii hore ee Chelsea wax yar uun kaddib guuldaradii Real ee semi-finalka Champions League ayaa u muuqata mid ka careysiinaysa saxaafadda Isbaanishka oo todobaadkan aad u hadalhaya.
Hazard ayaa la arkay isagoo la kaftamaya daafaca Blues Kurt Zouma wax yar uun ka dib markii uu garsooraha ku dhuftay seerigii ugu danbeyay ee kulankii Stamford Bridge, iyadoo khabiirrada caanka ah ee warbaahinta El Chiringuito ay si gaar ah ugu maadeesteen xiddigan iyagoo sidoo kale sheegay in madaxda Madrid ay aad uga caroodeen ficilka weeraryahankan.
Wargeyska ugu weyn ee magaalada Madrid kasoo baxa ee la yiraahdo Marca ayaa warinaya in Real ay u furan tahay inay dhageysato dalabyada xagaagan u imanaya Hazard.
Inkasta oo ay suurtogal ahayd in si bilaash ah lagu helo sannadkii xigay, Real Madrid ayaa lacag 100 milyan oo Euro ah kusoo iibsatay Hazard sannadkii 2019kii – go’aankaasi ayay dad badani u arkeen mid doqonnimo ah.
Warar qaar ayaa tibaaxaya in falkii uu Hazard ku kacay habeenkii kooxdiisa laga reebay Champions League-ga uusan sabab u ahayn in la iib geeyo xitaa haddi Real Madrid ay ku guulleeysato horyaalka La Liga waxaa la sheegayaa in go’aankoodu aanu is beddeleyn.
30 jirkaan ayaa wali heysta in ka badan seddex sano oo dheeri ah si uu usii joogi magaalada Madrid, qandaraaskiisa ayaana la sheegay inuu yahay 400 oo kun oo ginni isbuucii, iyadoo kooxaha doonaya ay ku adkaaneeyso inay hamigooda soo bandhigaan maadaama ay badana la tacaalayaan dhaqaale xumi soo wajahday kaddib aafada Covid-19 ee dunida faraha ba’an ku haya.